डोल्मा शेर्पा नेपालमा पनि बन्धक ! – Everest Times News
सिन्धुपाल्चोक गुम्बा क्याङसिङकी डोल्मा शेर्पा असार २४ गते साँझ ८ बजे कुवेतबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिन् ।
पुनर्जीवन पाएर नेपाल आएकी हुनाले उनी आउनुको महत्व बेग्लै थियो । सीमित पत्रकारहरुको उपस्थितिमा उनको आगमनबारे पत्रकार सम्मेलन भयो र उनी सीधै एक आश्रयघरमा पुगिन् ।
डोल्माको पक्षबाट मृतकको परिवारलाई ब्लडमनि बुझाएपछि उनलाई सुनाइएको मृत्युदण्ड मिनाहा गरियो र उनलाई १० वर्षसम्म जेल सजाय सुनाइयो । यही जेल सजाय भुक्तानी गरी अहिले नेपाल आइपुगेकी छिन् डोल्मा ।
काठमाडौं आइपुग्दा विमानस्थलमा डोल्मालाई लिन उनका भाई शेराब लामा पुगे । गोरखाको चुमचेट उनको माइती हो । घर काठमाडौंसँगै जोडिएको जिल्ला सिन्धुपाल्चोक । काठमाडौंमा उनका आफन्त पनि छन् । तर, उनी आश्रयघरमा भएको कुरा केही दिनमा सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर आयो । त्यसकै आधारमा उनको घरबाट ससुरा बुझ्न आइपुगेको डोल्माले सुनाईन् ।
डोल्माका श्रीमान रोजगारीका लागि इराक पुगेका छन् । उनका १४ वर्षे छोरा काठमाडौंमा कक्षा ८ मा पढ्दैछन् । झन्डै तीन हप्ता बढी भइसक्यो उनी आश्रयघरमा बस्न थालेकी । घरपरिवार हुदाँहुदै किन आश्रयघरमा त ?
‘मलाई घरका कसैले लिन आएनन्, माइतमा पनि बस्न गाह्रो छ, छोरा एक आफन्तसँग बसिरहेको रहेछ, त्यहाँ गएर बस्ने कुरा भएन,’ डोल्मा भन्छिन्, ‘यही आश्रयघरमा नबसे म कहाँ जाने ?’
डोल्मा महाराजगन्जस्थित भर्खरै सञ्चालनमा आएको हार्मोनी होम नामक वृद्धाश्रममा बस्दै आएकी छिन् । उक्त वृद्धाश्रम क्रोनिक भएका वृद्धाहरुका लागि खोलिएको भएपनि यसका सञ्चालिक रोसा श्रेष्ठले भने हार्मोनी सबैखालका होमलेसहरुका लागि भएको दाबी गरिन् ।
आफ्ना हरेक सेवाग्राही पैसा तिरेर यहाँ बस्न सक्ने र ती सेवाग्राहीलाई मेडिकल सेवासमेत भएको उनले बताइन् । डोल्मा बेखर्ची छिन्, उनका लागि पैसा कसले दिन्छ त ? सुरुमा उनका लागि कतैबाट पैसा आउने भनेपनि पछि श्रेष्ठले डोल्माका लागि कुनै पैसा नलिएको दाबी गरिन् ।
डोल्मा बेखर्ची भएको खबर सार्वजनिक भए लगत्तै डोल्मा बचाउ अभियानले संकलन गरेको एक लाख १६ हजार रुपैयाँ माइती नेपालले एक कार्यक्रम गरी डोल्मालाई हस्तान्तरण ग¥यो । उनका नाममा उठेका धेरै पैसाको लेखाजोखासहितका लेखहरु पनि प्रकाशनमा आएको छ । डोल्माको नाममा उठेको ३२ लाख रुपैयाँ गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएन)को सचिवालय शाखामा रहेको कुरा पनि प्रकाशनमा आयो । तर, ती पैसा डोल्मालाई दिने भन्ने कुरामा कुनै स्पष्टता आएको छैन ।
बेखर्ची भएर आश्रयघरमा बस्नुपर्दा आफुलाई निकै अप्ठेरो महसुस हुने डोल्मा बताउँछिन् । ‘मलाई नि यहाँ आएर बस्नुपर्दा निकै अप्ठेरो लागेको छ, बेखर्ची भएर यहाँ बसिरहदाँ, तर परिवार जस्तै ठाउँ पाएकोले यो ठाउँ छोड्न पनि सक्दिनँ ।’
डोल्माको दैनिकी कस्तो छ त आश्रयघरमा ? यसबारे हर्मोनीकी सञ्चालिका श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘उहाँको दैनिकी यहाँका अरु क्लाइन्टकै जस्तो छ, उहाँलाई मेन्टल प्रब्लमहरु हुन सक्छ भनेर हामीले दैनिक हेरचाह पनि गर्छौ, औषधिहरु पनि खाइरहनुभएको छ ।’
दस वर्षसम्म जेलमा बस्दा उनको मानासिक अवस्था एकोहोरो हुन सक्ने भन्दै उनलाई औषधिको व्यवस्था गरेको श्रेष्ठले बताइन् । डोल्माले पनि आफु जेलमा हुदाँदेखि नै डिप्रेसनको औषधी लिदैं आएको स्विकारिन् ।
डोल्माको एउटै भनाई छ, ‘छोराको भविष्यको लागि सरकारले वा कसैले एउटा राम्रो रोजगारी दिए अबका दिन बिताउन सजिलो हुने थियो ।’
गोरखा चुमचेट चुम्लिङकी डोल्माका बुवाले दुई श्रीमती ल्याएका रहेछन् । पहिलो श्रीमतीबाट डोल्मा जन्मिइन् । जेठी पट्टिबाट उनी एक्ली सन्तान हुन् । कान्छी आमाबाट दुई भाइ र दुई बहिनी छन् । बुवाको निधन भइसकेकोले उनलाई माइत जान पनि अप्ठेरो लाग्ने गरेको सुनाउँछिन् ।
यता घरको अवस्था उस्तै छ । घर सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिकास्थित क्याङसिङमा छ । उनका श्रीमान आङतेन्जी शेर्पा इराकमा छन् । डोल्माकाअनुसार उनी आफ्नो घरमा त्यति ओहोरदोहोर गरेकी छैनन् । त्यसैले घर यही पर्छ भनेर ठम्याउन नसक्ने उनले बताइन् ।
आफु नेपाल आइपुग्दा विमानस्थलमा घरको मान्छे कोही नदेख्दा मन रोएको उनले सुनाइन् । खबर नपुगेर पनि हुनसक्छ उहाँहरु पत्रिकामा छापेपछि मात्र भेट्न आएको उनले बताइन् । डोल्माकाअनुसार उनी विदेशिएको केही महिनामा उनका श्रीमान तेन्जीले अर्की श्रीमती भित्र्याए । कान्छीको तर्फबाट २ सन्तान भइसकेका छन् । कान्छी श्रीमती ल्याइसकेकाले पनि आफु उक्त घरमा गइरहन निकै अप्ठेरो लागेको उनको भनाई थियो ।
मेरो मनमा लागेको कुरा…
डोल्माको मृत्युदण्डको समाचारदेखि उनलाई मृत्युदण्ड मिनाहा भएको कुरापछि मैले उनकोबारेमा नेपाल आइपुगेपछि मात्र थाह पाएँ । उनीबारे समाचार प्रकाशन भएपछि उनको बारेमा धेरै थाहा पाएका एकजनालाई मैले उनको सम्पर्क नम्बर मागें । ती व्यक्तिले डोल्मा गोरखा गएको र हप्तादिनपछि मात्र फर्कने बताए । धेरै प्रयासपछि डोल्मालाई भेट्न पुगें । र हार्मोनीमा बुझ्दा उनी गोरखा गएको भन्ने कुरा झुठो रहेछ ।
हर्मोनीमा पनि मैले मुश्किलले भेट्ने समय पाएँ । डोल्मा नेपाल आएदेखिको एउटै ड्रेसमा सार्वजनिक हुदैं आएकी छन् । उनी आफै भन्छिन् ‘म यही एउटा कपडा लिएर आएकी हुँ । अरु केही छैन ।’ विमानस्थलमा खिचिएको उनको तस्बिर यही लेखमा छ । माइती नेपालले सहयोग गरेको कार्यक्रममा पनि यही कपडा लगाएकी थिइन् । मैले खिचेको फोटो पनि उही कालो कुर्थासुरुवाल छ ।
डोल्माको नजिककाहरु उनलाई परिवारमै एट्याच गरी राख्न चाहेको देखिन्छन् । उनीहरुका अनुसार डोल्मालाई सरकारले सहयोग ग¥यो । देशविदेशमा रहेका नेपालीहरुले सहयोग ग¥यो । उनको ज्यान बच्यो । पुनर्जीवन पाइन् डोल्माले । त्यही नै लाख भएकाले अब नेपाल आएर रोनाधोना गर्न नहुने आफन्तहरुको भनाइ छ । पारिवारिक श्रोत भन्छ, ‘डोल्माको कमजोरी र डोल्माको नाम बेच्नका लागि उनलाई कसैले आश्रयघरमा लगेर राखिएको छ । यो अन्यायीपूर्ण छ । नेपाल आएर स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने डोल्मा एउटा कोठामा थुनिएकी छे ।’
म हार्मोनीमा जाँदा सञ्चालिका श्रेष्ठले मैले प्रश्न नराख्दै यहीबारे प्रष्ट पार्न खोजिन् । ‘मानिसहरुले यहाँ ल्याएर डोल्मालाई थुनेर राख्यो सम्म भनेर शंका गरेका छन्, यहाँ त उसलाई पारिवारिक वातावरण मिलेको छ, मान्छेहरुले डोल्मा सधै यही बस्छ भनेर पनि शंका गर्ने रहेछन्, उ ठिक भएपछि जाने परिवारमै हो ।’ श्रेष्ठका अनुसार डोल्मा कसैको अनुरोधमा हार्मोनीसम्म आइपुगेको बताएपनि ती सुत्रधारको नाम भने उल्लेख गर्न चाहिनन् ।
मैले डोल्मालाई जिल्लाको नाता लगाएर कुरा सुरु गरेको थिएँ । तर, हार्मोनीकै सञ्चालिकाको रहोबरमा रहेकोले होला अथवा कुनै कारण उनी त्यति खुल्न चाहिनन् । सञ्चालिका श्रेष्ठ र डोल्माको जवाफ लगभग उस्तै उस्तै थियो । भेट्न मुश्किल, एउटै कपडा, परिवारको इच्छाविपरित वृद्धाश्रममा बस्नु आफैंमा विवादास्पद कुराहरु छन् । यो घटना देखेपछि मलाई लागेको पत्रकार, समाजसेवामा लाग्नेहरुले कसैको नियति, कमजोरी, गरिबीलाई बेच्न किन उद्दत हुन्छन् होला ?